Pcb Kugadzira Musangano - Shenzhen KAISHENG pcb CO., LTD
Keyword: Pcb gungano, pcb kugadzira uye gungano, PCBA kugona
PCBFuture ine yakasimba yemhando yekudzora system uye zvese zvitupa senge TS16949, UL, RoHS, CE, ISO, nezvimwe .. Kune PCB, isu tine Flying Probe Ongororo uye E-Kuedza. ZvePCBA, isu tine IQC, AOI, Rinoshanda Bvunzo, QA. Izvi zvakakosha asi zvakakosha zvinhu zvePCB indasitiri.
Sezvo inonyanya kufarirwa zvemagetsi magungano makambani muChina, isu tanga tichipa izere-spec mhinduro dzemagetsi dzekugadzira kwemakore gumi kusangana nezvinodiwa zvemusika weChina.
Tine vatengi vanobva kumaindasitiri akasiyana maererano nemutengo-kugona, mhando, kuendesa uye chero zvimwe zvinodiwa. Kubva paPCB dhizaini kuenda kuPBB prototyping, kugadzira kwakawanda, uyezve gungano rePBB, emagetsi bhokisi musangano masevhisi, edu akadhindwa wedunhu mabhodhi anoshandiswa zvakanyanya mu robhoti, zvekurapa, zvemotokari, zvekutaurirana, maindasitiri nemutengi zvigadzirwa zvemagetsi.
Tiri kuita anotevera mabhizinesi: anoshanduka pcb, tsika pcb, kumumvuri pcb, turnkey pcb gungano, yemagetsi pcb gungano, diki batch mangé gungano pcb, nezvimwewo.
Nei sarudza yedu pcb yekugadzira uye gungano:
1.Extremely yakakwirira chaiyo uye chaiyo-yedu prototypes akanakisa pakururama uye anogona kusangana nevatengi maratidziro. Izvi zvinodaro nekuti tinotora mhando uye ruzivo zvakanyanya.
2.Fast kutendeuka-isu tinonzwisisa kukosha kwevatengi nguva. Naizvozvo, isu tinovavarira kugadzira yako prototype pane zvine mwero kumhanya. Naizvozvo, yedu yekukurumidza prototype PCB musangano webasa inogona kupfupisa nguva yako yekumirira kubva kumavhiki mashoma kusvika kumaminetsi mashoma.
3.Extremely low mitengo - isu tine nzira yakazara yekubatsira iwe kuchengetedza mitengo yakaderera uye inokwanisika. Naizvozvo, isu tinopedzisa chirongwa chako nebhajeti inonzwisisika.
4.Kukanganisa kururamisa-Yedu pcb prototype yakakosha kwazvo kuwana hurema, saka inogona kudzivirira kukundikana kukuru gare gare. Kubvisa hurema uhu nekukurumidza sezvinobvira kunogona kukuserera nguva yakawanda uye mutengo
5.Kurumidza dzoka pcb gungano-unogona kukumbira pcb prototypes. Iwe unongoda kuendesa iyo pcb dhizaini uye ugamuchire mhedzisiro.
6.Sample kuyedza isati izere kugadzirwa - Tinokutendera iwe kuyedza prototype mabhodhi uye kusimbisa kana vachishanda sekudikanwa.
Pcb gungano kugona:
Pamusoro kubhururuka (SMT)
SMT & THT chemasanganiswa
Kumwe kana Kaviri Akatenderedzwa Kuiswa
Akanaka Pitch Zvikamu
BGA uye nezvimwe
Ruzivo Runodiwa rwePCBA:
Kupiwa pazasi pane runyorwa rwemagetsi uye zvinosanganisirwa zvinoshandiswa izvo zvinodiwa kune yakadhindwa wedunhu bhodhi musangano:
• Yakadhindwa Circuit Board (pcb)
• Magetsi zvikamu zvakadai seanopikisa.
• Soldering zvinhu zvakadai sewaya, preforms, bhaa, kubuda uye kunama.
• Soldering michina senge wave wave soldering muchina, pamusoro mounter, SMT-Stencil, soldering yechigarire uye yekuyedza maturusi nezvimwe.
Sezvo PCBFuture yakagadzwa, isu takashanda pamwe nemakambani mazhinji kumba nekune dzimwe nyika nepfungwa yehunhu hwekutanga uye mutengi ndimwari vakawana mukurumbira mukuru. Isu takawana kuvimba nekutsigirwa kwemakambani kubva kunopfuura makumi mana nyika nemitengo yemakwikwi, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nebasa rakanakisa.